ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး: သင်ဒါဟာများအတွက် Wired နေ (2011) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Pair ကို Bond တစ်ဇီဝအစီအစဉ်ကိုမယဉ်ကျေးမှုဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ရောင်စုံခင်းကျင်းနေသော်လည်းနေရာတိုင်းလူသားမြားသကြာရှည်စွာအဘို့အစိတ်ပိုင်းပူးတွဲမေတ္တာစိတ်လဲများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်သစ္စာမဲ့အခါသစ္စာဖောက်ခံစားရတယ်။ ဤ အပြုအမူတွေကိုပင်ဖြစ်ကြသည်, မကျပန်းယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှု၏ထုတ်ကုန်။ ဒီပွိုင့်အောင်အခြားသောလမ်း: အများစုမှာနို့တိုက်သတ္တဝါများ မ သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်၏အမည်များကိုသူတို့၏ဘောင်းဘီပေါ်တွင်တက်တူး ထိုး၍ ဖြစ်သည် မဟုတ် မနာလိုဒေါသ၏ကိုက်ညီတဲ့မှဘာသာရပ်။
လူ့ဦးနှောက်မေတ္တာတော်၌တည် Fall မှတည်ဆောက်နေအစောပိုင်းကဖော်ပြချက်တစ်ခုတွင်တွဲဆက်ထားသောအပြုအမူများတွင်နောက်ကွယ်၌ neurobiological ယန္တရားများရှိသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်မှုနှောင်ကြိုးပရိုဂရမ်ကိုသုတေသနပြုတဲ့အထောက်အထားတွေပိုများလာပါပြီ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သည့်၎င်းသည်ကျော်ကြားသောစုံတွဲတွဲစပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှ vole မှရရှိသောအထောက်အထားများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ New York Times သတင်းစာ ယောဟနျသ Tierney သစ်ကိုသုတေသနပြုဖော်ပြထားတယ် ဒီလမ်း:
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးသည်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲသို့လပေါင်းများစွာလာသောမည်သူ့ကိုမျှပရောပရည်မပြုရန်ဂရုတစိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူမသည်မျက်လုံးချင်းနှင့်စကားဝိုင်းကိုအနည်းဆုံးအထိထားခဲ့သည်။ သူမသည်မိတ်ကပ်သို့မဟုတ်ရေမွှေးများကိုတစ်ခါမျှမသုံး၊ ဆံပင်ကိုရိုးရှင်းသော ponytail တွင်ထားရှိပြီးဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ရိုးရှင်းသောတီရှပ်ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ …
ယခင်သုတေသန သူမ၏ရာသီလာခြင်းသံသရာ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအဆင့်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိပုံရပြီးထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဤနေရာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် - သို့သော်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မပါ ၀ င်သောအမျိုးသားတစ် ဦး မှထိုမိန်းမအားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမှသာလျှင်ပြသခဲ့သည်။
အခြားယောက်ျားတွေ, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့, သိသိသာသာအဖြစ်သူမ၏ rated နည်းသော သူမကလေးမွေးဖွားမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်၌သူသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ အကြောင်းမှာအချို့သောအဆင့်၌သူတို့သည်သူမခံစားခဲ့ရသောကြောင့်သူတို့၏ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။ လမ်းလွဲရန်လှည့်စားခံရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သူမသည်သူမမှာသူမအလွန်ပူပြင်းလှသည်ဟုသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောဟန်ရှိသည်။ …
ပျော်ရွှင်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာရေရှည်တည်တံ့နိုင်သူယောက်ျားမိန်းမတို့: သဘာဝရွေးချယ်ခြင်းကိုရှည်လျားအလုံအလောက်သားသမီးတွေနဲ့အတူတကွတည်းခိုသောသူတို့အားမျက်နှာသာ။ သူတို့ကသစ်စာရှိဖို့သီလမှအကြိုးမည်ဟု, ဒါမှမဟုတ်မသိမသာလိမ်စဉ်အနည်းဆုံးမှာစိတ်အားထက်သန်သညျသစ်စာပေါ်လာဖို့။
UCLA မှစိတ်ပညာရှင် Martie Haselton ကိုလည်းသူကကိုးကားသည် - အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်မျိုးဥထွက်ခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ [လူသားများ] သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူအားဤပြောင်းလဲမှုများကိုမောင်းနှင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးမရှိပါ။ [ဒီလိုသုတေသနမျိုး] ကကျွန်တော်တို့ဟာတခြားနို့တိုက်သတ္တဝါတွေလိုပဲထင်ထားတာထက်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေပါတယ်။
ဘယ်လိုစစ်မှန်တဲ့။ voles ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များပြီးသားအခြေခံဖုံးကွယ်နေကြသည် pair တစုံဘွန်းထိန်းညှိကြောင်းအာရုံကြောယန္တရားများ အပြုအမူများနှင့်သေချာပေါက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာအကျွမ်းတဝင်မရှိသောဆန္ဒရှိသည့်အမျိုးသမီးများအားယောက်ျားလေး၏ခုခံကာကွယ်ရန်လိုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (သူသည်အဓိကညှစ်ညှစ်မှုနှင့်အတူနှောင်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုတခါတည်ထောင်ခဲ့သည်) ။ ဒီအမူအကျင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး အာရုံကြောဓာတု vasopressin သည်သူ၏ ဦး နှောက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွင်တိုးပွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (စကားမစပ်မစ္စတာကိုးလ်ကိုအမြဲတမ်းသစ္စာရှိရှိမထားနိုင်ဘူး။
တစ် ဦး နို့တိုက်သတ္တဝါနှောင်ကြိုးနိုင်သလားရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်သောစက်ပြင်အကြောင်းကိုစပ်စု? monogamous voles များတွင်သဘာဝရွေးချယ်မှုသည် ဦး နှောက်၏ခြေလက်စနစ်အတွင်းရှိ oxytocin နှင့် vasopressin receptors များပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်သည်။ လိင်မှုကိစ္စအားလုံးသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအကျိုးပြုသည်မှန်သော်လည်းတစ်စုံတစ်ရာသောလိင်မှုကိစ္စသည်အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ၏ခံစားချက်ကောင်းများကိုရရှိစေသည်။ ခလုတ်ခုံယန္တရားသည်မူလဖြစ်သည် စွဲယန္တရား (အရာရှိသမျှသည်အခြားသောစှဲ hijack) ။ အဘယ်ကြောင့်စွဲလမ်းနိုင်ဤသူကားအ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှောင့်အယှက်.
အကယ်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် dopamine အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုကိုအတုဖြင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့ပါကတိရစ္ဆာန်သည်ပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲဖြစ်လာနိုင်သည် အားလုံးအမျိုးသမီးဆီသို့ရန်လို။ ဒီအချို့မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်ပေါ်လာရှင်းပြကူညီနိုငျ အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံး?
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စုံတွဲသည်အဆက်အသွယ်ရင့်ကျက်မှုမှာဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များမှမဟုတ်ဘဲလူမှုရေးအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မွေးကင်းစကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်ယန္တရားမှဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်နှင့်ထိုယန္တရားနှစ်ခုသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ထပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်အနောက်တိုင်းသားများစွာသည်ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသောယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံကိုခံနေကြရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်သဘာဝအားဖြင့် bonobo chimps ကဲ့သို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသို့မဟုတ် pair-bonding တိမ်းညွတ်မှုများသည်အပေါ်ယံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုများဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ။
လူ့နှင့် bonobo ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချို့ခြောက်လသန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစဉ်နဲ့ကွဲသွားခဲ့ရတယ်စိတ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းနှီးဆုံးဆွေမျိုးများအပေါ်များမှာ ကျွန်တော်တို့၏ သူတို့န်းကျင်မရှိတော့ရင်တောင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သစ်ပင်၏အကိုင်းအခက်။ ထိုဌာနခွဲတစ်လျှောက်ရှိလူသားများသည် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိကြသည်.
နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ pair တစုံဘွန်းရှားပါးပေမဲ့တစ်ဦးမျိုးစိတ် pair တစုံ bonders စေသောပွောငျးလဲသေချာပေါက်ထူးခြားဆန်းပြားမရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, pair တစုံ-bonding မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ဒါသိပ္ပံပညာရှင်များရိုးရှင်းစွာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသတိပေးနေဖြင့်တစ်စုံ bonder သို့မြက်ခင်း vole ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသူတို့ရဲ့ကရာမြက်ခင်း-vole ဝမ်းကွဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ တစ်ခုတည်းဗီဇ မိမိအ forebrain ၌တည်၏။ (ဒါဟာ vasopressin များအတွက် receptors တိုးပွါး) ။ ဒါဟာလူ့မိတ်လိုက်၏အခြေခံကိုနားလည်မှကြွလာသောအခါရေတိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးကွာသော bonobo ဝမ်းကွဲ၏အပြုအမူဖျော်ဖြေမှု, ဒါပေမယ့်အတော်လေးဆီလျှော်သည်။
"အိုး, ငါတို့ဘယ်လောက်ကရာကြည့်ရှုပါ!" မင်းထင်နေတာလား ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိချိတ်ဆက်မှုအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအချက်နှစ်ချက်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့အနောက် (ယေဘုယျအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသုံးပြီး) တွင်မလေ့လာမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟုတ်ဘဲ၏သေးငယ်တဲ့အချပ်ပေါ်အခြေခံပြီးလူ့အပြုအမူအားလုံး characterizing အတွက်အတန်ငယ်မဆင်မခြင်များမှာ ကိုယ်စားမပြုသောယဉ်ကျေးမှု။ တင်းကျပ်သောမယားလူ့စံမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, အများဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်နေဆဲအားလုံးအတွက်နေထိုင်ကြသည်။ (အတော်များများယဉ်ကျေးမှုတစ်ဦးသည်အခြားမယားကိုယူဖို့ကမတတ်နိုင်နိုင်သူသည်လူ, ဒါပေမယ့်အနည်းခွင့် နိုင် ကမတတ်နိုင်။ )
တိုတောင်းသော, သင်မျိုးစုံမိတ်ဖက်အတူတက် hooking လျှင်သက်သက်သာအပန်းဖြေဘို့ သငျသညျ တစ် ဦး ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏အပြုအမူသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလူ့အပြုအမူမဟုတ်ပါ။ အနောက်တိုင်းသုတေသီများကအလွယ်တကူလျစ်လျူရှုနိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး ၁၅၀၀ ကိုလေ့လာချက်အရ“လူသားတွေဟာလိင်ဖူးအဘယ်ကြောင့်။ " ကျောင်းသားအများအပြားသည်မျိုးပွားခြင်းမဟုတ်ဘဲအပန်းဖြေခြင်းအတွက်လိင်ဆက်ဆံကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ (တကယ်ပဲ ??) အခြားယဉ်ကျေးမှုများတွင်လိင်သည်အဓိကအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမကြာခဏအတော်အတန်တင်းကြပ်သည် တစ်မိသားစုမျိုးပွါးခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း။ လက်တွဲဖော်များစွာနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ပင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကလေးများရှိနိုင်သည်။ဟောပြောမှုတွေပွား၎င်း၏ရည်မှန်းချက်အဖြစ် ") ။ (စာဖတ်သူများမှ လွဲ၍ မည်သည့်မှားယွင်းသောကောက်ချက်ချချက်မျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်က 'အပန်းဖြေမှုအတွက်လိင်' ပန်ကာဖြစ်သော်လည်းပရိသတ်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ ) ပူးတွဲမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကို.)
ဒုတိယ၊ “ pair bonder” ဟူသောဝေါဟာရသည်စုံလင်သောလိင်ဆိုင်ရာမယားပြိုင်စနစ်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအိမ်ထောင်ဖက်များသည်အတူတကွ လက်တွဲ၍ ကလေးများမွေးဖွားလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည် လူမှုရေးစျမယား) ။ အဘယ်သူမျှမ pair တစုံ-Bond နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်လုံးဝလိင်သီးသန့်ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါမဟုတ်လူသားအားလုံးအသက်အဘို့တရာရာခိုင်နှုန်းကိုသစ်စာရှိကိုအချို့ပူးတွဲမှုမပါဘဲလိင်ရှိသည်သောအဖြစ်မှန်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးမျိုး လည်း ဆင့်ကဲဆောင်ရွက်ပါသည်။
သို့သော်သင့်အပါအ ၀ င် pair-bonder ဦး နှောက်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တည်ဆောက်ထားကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံသည်ယခုအချိန်တွင်အရူးအမူးစွဲလမ်းနေလျှင်ပင်သင်၏လိင်မှုဘ ၀ ၏ဗဟိုချက်တွင်တည်မြဲသောနှောင်ကြိုးအတွက်ဟန်ဆောင်ခြင်းကိုသတိပြုမိပါကတောင်းပန်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင်၏အကြောင်းပြချက်သည်သင်၏ကြီးထွားမှုကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏ ဦး နှောက်တွင်ဖြစ်သည် ဒီပင်အလားအလာကိုအသာပုတ်.
အလှအပနှင့်လူငယ်များကိုတန်ဖိုးထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုဇနီးမောင်နှံသည်နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပို၍ နှစ်သက်လာနိုင်မည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ... အကယ်၍ သင်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုစုံတွဲများ၏လက်တဆုပ်စာကိုသိလျှင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်းနှီးစွာချစ်ခင်နေဆဲရှိသူများအနက်မှသူတို့ကိုစဉ်းစားပါ။ သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ …ကျိန် ဆို၍ အပ်နှံထားသောလက်တွဲဖော်ကိုမြင်ခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ကြားခြင်း [အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း [bonding hormone, oxytocin]] ထွက်လာရန်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသည်။ - Mark Chamberlain PhD
"ကိုကြည့်ပါအဆိုပါ ape ဒါဟာဒေါင်းအလံထင်ဒါက: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာလူ့လိင်ကွာခြားချက်များကားပါသလား?"
(ကောက်နုတ်ထားပါတယ်) Pair ကို Bond
Pair bonding (သို့မဟုတ် monogamy) သည်မျိုးစိတ်များ၏ ၅% အောက်၌တွေ့ရသောနို့တိုက်သတ္တဝါများအကြားတွင်အလွန်ရှားပါးသောမိတ်လိုက်ခြင်းစနစ် (Kleiman, 5) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းသည်လူသားများ၏မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ repertoire တွင်အဓိကကျသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကမိတ်လိုက်ခြင်းစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးဆုံးဆွေမျိုးများဖြစ်သော Great Apes အပါအ ၀ င်နို့တိုက်သတ္တဝါအများစုထက်ငှက်များ၏ပုံမှန်မိတ်လိုက်ခြင်းစနစ်နှင့်ပိုမိုတူသည်ဟူသောအချက်မှာသိသာထင်ရှားသည်။ ဤပြောဆိုချက်ကိုပြုလုပ်ရာတွင်အချက်သုံးချက်ကိုရှင်းလင်းရန်အရေးကြီးသည်။ ပထမ ဦး စွာပြောဆိုချက်မှာ pair တစုံချည်နှောင်ခြင်းသည်ဘဝတွင်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လူမှုရေးအရပြenfor္ဌာန်းထားသည့်တစ်သက်တာ monogamy မရှိခြင်းသည်များသောအားဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးများသည်လနှင့်ချီ။ ကြာရှည်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည် (Fisher, 1977) ။ သို့သော်ကွာရှင်းမှုအပေါ်တင်းကြပ်စွာကန့်သတ်မှုများမရှိသောရိုးရာတောင့်တင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌ပင်အတွဲလိုက်ငွေချေးစာချုပ်များ၏သိသိသာသာလူနည်းစုသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။
ဒုတိယအချက်မှာဆိုလျှင်လူ့စုံတွဲနှောင်ကြိုးများသည်အမြဲတမ်းလိင်ဆိုင်ရာသီးသန့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အများစုအရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ၅၀% သည်ရေရှည်ကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးတွင်သစ္စာမရှိကြောင်း (Blow & Hartnett, 50) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအချို့သည်လူမှုရေးဖခင်မဟုတ်သောအခြားသူတစ် ဦး ဦး မှဆင်းသက်လာသောကြောင့်အချို့သောအမျိုးအနွယ်အချို့ကိုတွေ့ရှိရသည် (အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်များက ၁-၃% ခန့်တွင်ရှိသည်။ Anderson, 2005; Wolf, Musch, Enczmann, & Fischer, 1) ။ တတိယအချက်အနေဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ စစ်မှန်သော” သို့မဟုတ်သဘာ ၀ မိတ်လိုက်သည့်စနစ်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ တစ်မျိုး၊ အမျိုးသားတစ် ဦး၊ အမျိုးသမီးနှစ် ဦး သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုများသည့် polyandry (အမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ အမျိုးသားနှစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအမျိုးသားများ၊ Murdock, 3) အပါအ ၀ င်အခြားမျိုးစိတ်များတွင်တွေ့ရသောမိတ်လိုက်စနစ်များကိုလူသားများပြသသည်။
ကလူ extrapair မိတ်လိုက်များတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့, ဒါမှမဟုတ်လက်မထပ်မီသို့မဟုတ်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးများအကြားပေါ့ပေါ့လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတှကျဒါဟာအစအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအအဖော်ရှာအပြုအမူတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်ကာလ၌တွေ့နေကြပါတယ်။ သို့သော်ရေရှည် polyandry ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအားလုံးအတော်လေးဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှင်အားလုံး plausibly လူ့တိရစ္ဆာန်၏အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ repertoire ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောဆိုချက်ကိုကြောင်း pair တစုံဘွန်းလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အနည်းကိန်းမိတ်လိုက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောဆိုချက်ကိုအစားတစ်စုံနှောင်ကြိုးကအချိန်ကြာမြင့်စွာခဲ့ပြီ, ငါတို့မျိုးစိတ်အတွက်လိင်နှင့်မျိုးပွားမှုအတွက်အသုံးအများဆုံး setting ကိုဖြစ်တယ်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲသဘောသဘာဝအပေါ်နက်ရှိုင်း Imprint ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ကြောင်းကိုရိုးရိုးပါပဲ။
ဘယ်လိုလိင်တံက၎င်း၏ spikes (2013) ဆုံးရှုံးသွားသော
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လက်နက်: စျမယား (2014)
သုတေသန cuckoldry ၏အနိမ့်မှုနှုန်း (2013) ကိုပြသ
ဝှေးစေ့အရွယ်အစားကလေးငယ်စောင့်ရှောက်မှု (2014) တွင်ယောက်ျားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်